Amai Joyce Mujuru
Dare repamusorosoro reConstitutional Court rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare nevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joice Mujuru chekuti mabond notes anzi haasi pamutemo munguva pfupi iri kutevera.
Amai Mujuru vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti mabond notes akawunzwa zvisiri pamutemo saka nokudaro haafanirwe kushandiswa munyika .
Mutauriri waAmai Mujuru, VaJealousy Mawarire vaudza Studio 7 kuti dare reConstitutional Court ranyorera magweta aAmai Mujuru kuti vasvitse magwaro kudare ekuti nyaya iyi izeyewe mudare kana kuti heads of arguement zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare naAmai Mujuru .
VaMawarire vanoti Amai Mujuru havasi kufara kuti veruzhinji vakambunyikidzwa kushandiswa ma bond notes uye mutemo wakashandiswa kuwunza mabond notes aya hausi pamutemo.
Vaenderera mberi vachiti hurumende kana ichida kudzosa mari yemuZimbabwe inofanira kuita izvi ichitevedzera murawu.
Amai Mujuru vakambokwidza nyaya iyi kumatare mabond notes aya asati aparurwa asi dare reConstituitional Court rakambovati vamire vatange vaona kuti hurumende yaizoshandisa nzira dzipi kuunza mabond notes aya.
Zvichakadai, veruzhinji vakaita saMuzvare Takunda Makanza vaudza Studio 7 kuti veruzhinji munyika vachiri kutambura kuwana mabond notes acho kumabhanga.
Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaunza mabond notes aya mwedzi wapera richiti aizoshandiswa kupa mubayiro kune vanenge vatengesa zvinhu kunze kwenyika.
Asi mabond notes aya ave kungowanikwa chero nani zvake kubhanga aine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica.